Etu esi mepụta Akụkọ Instagram izizi gị | Gam akporosis
Akụkọ Instagram abụrụla ọnwa ole na ole otu n'ime ihe kpakpando nke Instagram. O nweela ike ịkọwapụta ya Ndị ọrụ nde mmadụ 150 kwa ụbọchị n'oge na-adịghị anya maka atụmatụ ejiripụtaghachi site na oge Snapchat. Ọ bụghị oge mbụ ọ na-ewere ngwa a dị ka isi iyi nke mmụọ nsọ, mana ọ bụ oge a ka o jiri ya nke ọma.
Anyị ga-egosi gị otu esi emepụta akụkọ Instagram, otu n'ime atụmatụ kacha mma nke netwọkụ mmekọrịta a nwere ugbu a. An Instagram Akụkọ bụ onyonyo ma ọ bụ vidiyo nke kachasị 10 sekọnd Enwere ike ịhazi nke a n'ụzọ nke na ọ na-agbakwunye ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ anyị nwere na Instagram. Ọdịiche ya dị ukwuu bụ na ọ dị mma n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla karịa "dị ndụ ma zoo" maka awa 24. Ọ bụ ihe a mere anyị jiri banye na ntanetị mmekọrịta a ịmara na ị na-agwa anyị ndị anyị na-akpọtụrụ kwa ụbọchị site na "akụkọ" ndị a.
1 Ihe mbu: see foto ma obu vidiyo
2 Nke abụọ: ịhazi akụkọ anyị nke Instagram
2.1 Tinye nzacha Instagram
2.2 Mee ọ rụọ ọrụ / gbanyụọ ụda
2.3 Na-ese na ihuenyo
2.4 Ederede ederede ma ọ bụ ederede ederede
2.5 Etinye emojis
3 Nke ato: họrọ onye ịchọrọ ịhụ Akụkọ Instagram gị
Ihe mbu: see foto ma obu vidiyo
Site na ahịrị Akụkọ Akụkọ Instagram anyị nwere n’elu Instagram, anyị ga-ahụ akara ngosi na-egosi foto profaịlụ anyị na ihe ga-abụ ebe akụkọ anyị
Pịa na akara ngosi na isi interface nke anyị na-ahụ usoro nke ngwaọrụ na bọtịnụ mkpuchi nke na-enyere anyị aka iji igwefoto see foto ma ọ bụ mee ndekọ ma ọ bụrụ na anyị pịa ya ogologo oge. Weghaara vidiyo nwere ike ịdịru na 10 sekọnd ogologo.
Cheta na ị nwere ike ịga na-agbakọ akụkọ dị iche iche otu otu ọzọ ka ndị enyi gị ma ọ bụ kọntaktị gị wee nwee ike iji otu pịa dị mfe gafere otu n’otu.
Were video ma ọ bụ onyonyo anyị nwere ike nyefee ya n’akụkọ ihe mere eme anyị na akara ngosi kwesịrị ekwesị maka ya nke egosiri n'ụzọ zuru oke.
Nke abụọ: ịhazi akụkọ anyị nke Instagram
Ihe kachasị mma gbasara Akụkọ Instagram bụ na anyị nwere ike ịhazi ha nke mere na ha nwere nko ahụ iji gbaa ndị anyị na ha na-agba ume ka ha nọgide na-emegharị ha oge ọ bụla anyị wepụtara otu na Instagram.
Tinye nzacha Instagram
Nwere ike ịrụ mmegharị ahụ n'akụkụ iji tinye ihe nzacha dị iche iche nke Instagram mara nke ọma na nke ahụ na-enye anyị ohere ịme vidiyo ma ọ bụ onyonyo ahụ mma.
Mee ọ rụọ ọrụ / gbanyụọ ụda
Ị nwere ike wepụ ụda mgbe niile site na akara ngosi nke dị na elu ihuenyo na-enweghị nnukwu nsogbu.
Na-ese na ihuenyo
Omume ọma nke akụkọ ndị a bụ na ị nwere ike sere na ha iji hazie ha nke ọma. Have nwere ngwaọrụ atọ dị mkpa yana ikike ịhọrọ agba dị iche nke ị ga-eji nwee mmetụ pụrụ iche gị. Cheta na inwere ike imeghari ihe osise ahu site na igodo uzo ocha.
Ederede ederede ma ọ bụ ederede ederede
Akụkọ Instagram na-enyekwa ohere jiri ederede site na mkpụrụ edemede enwere ike ịbawanye ma ọ bụ gbanwee dị ka anyị si chọọ.
Ikekwe nke a bụ ihe kachasị mma iji nye akụkọ Instagram gị aka pụrụ iche. Họrọ otu n'ime emojis ma bugharịa ya na ihuenyo gaa ọbụna mụbaa nha ya ma ọ bụ bugharia ya. Nwekwara ike ịhọrọ ihe ndị ọzọ dị ka akwụkwọ mmado ma ọ bụ ọbụna ọnọdụ ahụ.
Nke ato: họrọ onye ịchọrọ ịhụ Akụkọ Instagram gị
Naanị ị hapụrụ bipụta akwụkwọ akụkọ Instagram mbụ gị jiri akụ elu. Can nwere ike ịnweta ihuenyo ebe ị nwere ike ịhụ akụkọ niile ị bugoro iji mara onye kọntaktị gị kpọtụrụ ha, chịkwaa onye ịchọrọ ịhụ ha ma ọ bụ chekwaa ha na ebe nchekwa nke ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ị chọghị ida ha.
I nwekwara ike biputere ha na mgbidi gi na Instagram ọ bụrụ na ị chọọ. Nke kachasị mma, ị nwere ike ịhọrọ onye ịchọrọ ịhụ akụkọ gị site na mmegharị ala ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ bụrụ nkeonwe.
Ma ọ bụ ya, Instagram akụkọ emelitere na nke kachasị ọhụrụ bụ ike idekọ na-enweghị jide bọtịnụ ọkụ ma ọ bụ mgbakwunye nke akwụkwọ mmado ịgbakwunye na akụkọ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi emepụta akụkọ Instagram, ọrụ kpakpando nke Instagram
The Huawei P10 na-ẹdụk ọzọ na ya curved ihuenyo